Ra’izul Wasaaraha Somalia oo Bigiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo Duqeyntii lagu dilay Axmad Cabdiqadir Amu « AYAAMO TV
Ra’izul Wasaaraha Somalia oo Bigiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo Duqeyntii lagu dilay Axmad Cabdiqadir Amu
445 Views Date January 27th, 2014 time 10:48 am
Ra’izul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Axmed ayaa Barta uu ku leeyahay Twitterka waxa uu soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo Duqeyn Habeenkii xalay Diyaaradaha Aan Duuliyaha laheyn ee Mareykanka ku dileen Sargaal katirsan Al-Shabaab.
Ra’izul Wasaaraha ayaa Bogiisa ku qoray in dowladiisu ay xaqiijinayso Duqeynta Diyaaradeed ee ka dhacday Deegaanka Haaway Gobolka Sh/Hoose ee lagu dilay Hogaamiye Axmad Cabdiqadir Amu (Isku dhuuq )iyo labo kamid ah ilaaladiisa.
Cabdi Wali Sheekh Axmed ayaa tilmaamay Weerada Nuucaan ah ee lala eeganayo Hogaamiyaasha Al-Shabaab ay yareeneyso dad uu sheegay in ay yihiin Jihaad doon oo kusoo qul qulaya Gudaha Soomaaliya si ay gabaad uga dhigtaan.
Ra’izul Wasaaraha ayaana sheegay in Dowlada Soomaaliya ay la shaqeneyso Dowladaha Caalamka ee dagaalka kula jira waxa loogu yeero Argagaxisada iyo sidii Soomaaliya looga cirib tiri lahaa Xarakada Al-Shabaab.
Ra’izul Wasaare Cabdi wali ayaaa tilmaamay in Hogaamiyaha xalay Duqeynta lagu dilay ee Isku dhuuq in uu ahaa Hogaamiyaha Kooxda Amniyaatka Shabaab oo ah Kooxda Masuulka ka ah Sirdoonka Milatriga Shabaab iyo iyo dillalka qorshaysan waa sida Ra’isul waasaruhu hadalka u dhigay.
Hadalka Ra’izul Wasaare Cabdi Wali ayaa imaanaya xili shalay galankii dambe Duqeyn ay masuuliyadiisa sheegatay Dowlada Mareykanka lagu dilay Sargaal sare oo katirsan AL-Shabaab una qaabilsanaa dhinaca Caafimaadka .